Search တရုပ်အော်ကား - GenFK.com
NLDပါတီ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ ​အောင်​နိုင်​ပြီးလို့ အစိုးရဖြစ်​လာတဲ့အခါ ကြုံ​တွေ လာနိုင်​တဲ့ ပြသနာအခက်​အခဲ​တွေကို ကြိုတင်​​တွေးဆသုံးသပ်​ ​ပြောပြသွားတာ အရမ်း​ကောင်းတယ်​​ဗျာ။ကျ​နော့်​အထင်​ သူ​ပြောသလိုပဲ အခုလက်​ရှိ NLD အစိုးရဟာ အဲဒီပြသနာအခက်အခဲ​​တွေကို တကယ်​ပဲ ရင်​ဆိုင်​​နေရတယ်​လို့ ထင်​မြင်​မိတယ်​။သိချင်​ရင်​​တော့ ဒီ​ဗီဒီယိုဖိုင်​ ​​လေးကိုသာ နား​ထောင်​ကြည့်​ကြ​ပေ​တော့။
17 Jul 2017 · 29K views
​ဘေးခပ်​သိမ်းအန္တရာယ်​ခပ်​သိမ်း၊ကင်း​အောင်​​နေ အားကိုးရာကခင်​ပွန်းကြီးဆယ်​ပါးကို ကိုယ်​ နှုတ်​ စိတ်​တို့နှင်​ပြစ့်​မှားမိသည်​ရှိ​သော်​ ခွင့်​လွှတ်​ပါရန်​ ခင်​ပွန်း​ကြီးဆယ်​ပါး ကို ရှိခိုး​တောင်းပန်​၍ ​ဘေးကင်းကြပါ​စေ.....
12 Sep 2017 · 6.3K views
တစ်​​​နေ့ ကျ​နော်​တို့ခရီးသွားဖို့ လက်​ဘက်​ရည်​ဆိုင်​မှာ လူစုရင်း ထိုင်​​နေတုန်းဆိုပါ​တော့။ ကိုယုန်​​လေးလဲ ရှိ​နေတယ်​။ အဲ့အချိန်​မှာ အဘွားတစ်​​ယောက်​ ​​ရောက်​လာတယ်​။ ပထမ​တော့ ကိုယုန်​ရယ်​ အဲ့အဘွားရယ်​ စကား​တွေ​ပြော​နေတာ​တွေ့တယ်​။ ကိုယ်လဲ ဘာမှန်းမသိဘူးရယ်​။ ကြားတစ်​ချက်​ မကြားတစ်​ချက်​ပဲ။ အာရုံကတခြား​ရောက်​​နေတာကိုး။ 😁 ​နောက်​​တော့မှ မျက်​စိခွဲ​​ပေးဖို့ စီစဉ်​​ပေးမယ်​ ဘာညာနဲ့ ကိုယုန့်​အသံကြား​တေ့ာ စိတ်​ဝင်​စားသွားတယ်​။ အာ့နဲ့ ​သေချာအာရုံစိုက်​နား​ထောင်​ရင်း လက်​ထဲမှာ အဆင်​သင့်​ရှိ​နေတဲ့ ကင်​မရာနဲ့ မှတ်​တမ်း​ကောက်​တင်​လိုက်​မိတယ်​။ အဲ့ထိလဲ ကိုယ်​က အကျင့်​ပါ​နေလို့ ​တွေ့ရာသာလိုက်​ရိုက်​တာ ဘာအစီစဉ်​မှမရှိဘူး။ ခရီးသွားတဲ့လမ်းမှာ ကိုယုန့်​ကို ရိုက်​ထားတဲ့ မှတ်​တမ်း video လေးပြ​တော့ ​"ဟ...မင်းဟာက မြန်​လိုက်​တာ ဘယ်​ချိန်​ထရိုက်​လိုက်​တာတုန်း" တဲ့။ အက်မင်​လက်​ကလဲ ဒါမျိုးဆို သိပ်​မြန်​တာ :p ​နောက်​ခရီးကပြန်​​ရောက်​​တော့လဲ ​မေ့​မေ့​လျော့​လျော့ပဲ သိပ်​ပြီးအာရုံမရ​သေးဘူး။ ​နောက်​​တော့ ကိုယုန်​က သူမအားလို့ ကိုယ်​တိုင်​မသွားနိုင်​လို့ အဘွားကို ​ဆေးရုံပို့ဖို့​တွေ မျက်​လုံးခွဲပီးတဲ့​နောက်​ ​ငွေ​ကြေး​ထောက်​ပံ့​ပေးဖို့ အဘွားအိမ်​ကို သွား​ပေးပါလို့ ​ပြော​တော့မှ ​အော်​ သူတကယ်​ မ​မေ့မ​လျော့နဲ့ လုပ်​​ပေးတာပဲလို့ သိရတာ။ အက်​မင်​လဲ သွားရင်း ဒါ​လေး​တွေကို သွားတိုင်း မှတ်​တမ်းတင်​ထားမိတယ်​။ ခုတိုက်​ဆိုင်​​တော့ ကိုယုန့်​မွေး​နေ့ကလဲ ရှိ​နေတယ်​။ အက်​မင်​​ကလဲ ခရီးထွက်​​နေ​တော့ ​ညက သူ့ရဲ့မွေး​နေ့ပွဲကို မသွားလိုက်​နိုင်​ဘူး။ အဲ့ဒါ​ကြောင့်​ မှတ်​မှတ်​ရရ မှတ်​တမ်းတင်​ထားတာ​လေး​တွေကို ကိုယုန့်​​ (အသားမဲပြီး ရုပ်​ဆိုးသ​လောက်​ စွန်းသ​ဘောမ​နော​ကောင်းပြီး ​စိတ်​ထားဖြူဆင်​တဲ့ ဘဲကြီး :p ) အတွက်​ ​​သေချာ Edit ​လုပ်​​ပြီး ​မွေး​နေ့လက်​​ဆောင်​အဖြစ်​ ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ အရင်​က အ​ပေါက်​ဆိုးလို့ တစ်​ခုခုဆို ဝုန်းဒိုင်းထလုပ်​တတ်​လို့ ကိုယုန့်​အ​ပေါ်မုန်း​နေကြတဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေရှိရင်​လဲ ဒီမှတ်​တမ်းဗီဒီယို​လေးကို ကြည့်​ပြီး သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်​ကို မြင်​နိုင်မှာမို့ ​ကျေနပ်​ကြလိမ့်​မယ်​လို့ ထင်​ပါတယ်​။ Happy Birthday Ko Kyaw Phone Aung ဒီ​မွေး​နေ့လက်​​ဆောင်​​လေးကို နှစ်​သက်​မယ်​လို့ထင်​ပါတယ်​။ အမှားပါခဲ့ရင်​လဲ ခွင့်​လွတ်​ပါ။ 😁 ​နောင်​ကို ယခုထပ်​ပိုပြီး အများ​ကောင်းကျိုးသယ်​ပိုးထမ်းရွက်​နိုင်​ပါ​စေ။ ပြီး​တော့ ​ယခုထပ်​ပိုပြီး ​အောင်​မြင်​တဲ့အနုပညာရှင်​​ကောင်း တစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ပါ​စေလို့ OG အက်​မင်​က ဆုမွန်ေ​ကာင်း​ တောင်းလိုက်​ပါတယ်​။ #OriginalGangster #Og
12 Sep 2017 · 127K views
ဒီနေ့ အမရဲ့အကယ်ဒမီပုံလေးတွေတင်လာတော့တက်လာတော့ မေ့မရတဲ့ နေ့စွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ကိုပြန်သွားကြတာပေါ့😘 အမရဲ့. အကယ်ဒမီ #HD video file လေးကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ😘 ★ ဇာတ်​​ဆောင်​ဆု ★ ၁။ သရုပ်​​ဆောင်​ရဲ့ ပြင်​ပစရိုက်​သဘာဝကိုမ​ပေါ်လွင်​ပဲ ဇာတ်​​ကောင်​ရဲ့. စရိုက်​/အရုပ်​/အသံ တို့ဖြင့်​ ပီပီပြင်​ပြင်​ သရုပ်​​ဆောင်​နိုင်​ရမည်​။ 👇👇👇 🌠ထိုအချက်​နဲ့. လရိပ်​​ဝေး တဖြစ်​ အိန္ဒြာ​ကျော်​ဇင်​ ရဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​ မှု ...... ⏩ ၁၀နှစ်​သမီးတည်းက. ကိုယ့်​ဘဝကို ထိန်း​ကျောင်း ခဲ့ရတဲ့ အ​ဝေး ​ထောင်​ထွက်​အ​မေနဲ့. စ​တွေတဲ့အချိန်​မှာကတည်းက. သူရဲ့. အပြုအမူ အ​ပြောအဆို အသံ​ နေအသံထားဟာ အကြည့်​​တွေကအစ လုံးဝအ​ဝေး ဖြစ်​တယ်​လို့ ​ပြောရဲတယ်​ အ​မေအ​ပေါ် နာကျည်းစိတ်​ရှိ​နေတဲ့ ဇာတ်​​ကောင်​ရဲ့ အ​ဝေး ​နေရာကို အံဝင်​တယ်​လို့ ခံစားရတယ်​ အ​မေက ဖတ်​​နေတဲ့အချိန်​ အံကိုကြိတ်​ပြီး ခံစားချက်​မဲ့​နေတဲ့ လူတစ်​​ယောက်​လို မျက်​နှာအမူယာနဲ ပဲလုပ်​ပြသွားတယ်​ ⏩​ယောင်းမနဲ့​ယောက္ခမက အိမ်​​ဖော်​ရဲ့စကားကိုယုံပြီး ရန်​လာ​ထောင်​တဲ့အခန်း မတရားစွပ်​စွဲခံရတဲ့ အ​ဝေး​လေး လင်​ဖြစ်​သူကပါ အ​မေနဲ့အမဘက်​က​နေ ရွံစရာ​ကောင်း​အောင်​ ပြန်​​ပြော​နေတဲ့အချိန်​ ......တုံ့ပြန်​တဲ့အ​ဝေး ....ရှိသမျှ မ​ကျေနပ်​မှု​တွေကို အကုန်​စုပြီး နင်​တစ်​လုံး ငါတစ်​လုံးနဲ့ အချက်​ကျကျ ပြန်​​ပြောတဲ့ အခန်းဟာ .....အူဝဲမှမဟုတ်​​တော့ပဲ ... အ​ဝေးဆိုတဲ့ မိန်းမကိုဖြစ်​သွားတာ "​အေးအခု ​ခြေနင်းဖတ်​​လောက်​အထိကို ငါအထင်​​သေးသွားပြီ ရှင်းလား " .....👏👏👏 ⏩ ​​ယောကျာ်း ဖြစ်​သူ မိန်းမတ​ယောက်​နဲ့ လက်​ချင်းတွဲ ပြီး​သာယာ​နေတာကို မျက်​မြင်​ကိုယ်​​တွေ မြင်​လိုက်​တဲ့ အခန်း ...... ထို​နေရာမှာ အူဝဲ က မျက်​လုံးနဲ့ပဲ သရုပ်​​ဆောင်​သွားတယ်​ ....​ဗိုက်​ကြီး တကားကား မျက်​နှာငယ်​​လေးနဲ့ ငါ့​ယောကျာ်းမှ ဟုတ်​ရဲ့လားဆိုပြီး ​သေချာ​အောင်​လိုက်​ ကြည့်​တဲ့အချိန်​ပတ်​ဝန်းကျင်​ကို ငဲ့ပြီး ဖြစ်​လာတဲ့​ဒေါသကို ရင်​ထဲမှာမြို သိပ့်​ရတဲ့ Acting အပိုအလိုမရှိကို ထိန်းညှိပြီး လုပ်​ပြသွားတယ်​ ⏩မယားငယ်​အတွက်​ ဝယ်​​ပေးထားတဲ့ပစ္စည်း​တွေကိုမြင်​တဲ့ အခန်း ​နေ့​မွေးမလား ည​မွေးမလား ဖြစ်​​နေတဲ့ ​ဗိုက်​ကြီးသည်​ အ​ဝေး ဘယ်​​လောက်​​တောင်​အားငယ်​​နေမလဲ လင်​က​ဖောက်​ပြန်​​နေတာကိုသိ​နေတာ မယားငယ်​အတွက်​ ခိုးဝယ်​တဲ့ပစ္စည်း​တွေကိုမြင်​​တော့ ဝမ်း​နည်းတယ်​ သိမ်ငယ်​တယ်​ အံသြတယ်​ သတ်​ချင်​​လောက်​​အောင်​ရွံ​နေတယ်​ ချစ်လည်းချစ်​​နေတယ်​ ရှုံးလည်းရှုံး​နေပြီ အဲ့ဒီခံစားချက်​​တွေကို ကတ်​​ကြေးနဲ့ရွယ်​ပြီး "ငါနင့်​ကိုသတ်​ပစ်​မှာ "ဆိုပြီး မျက်​နှာအမူယာ အသံ​နေအသံထား မျက်​လုံး Acting​တွေဟာအဲ့စကားတစ်​ခွန်းထဲနဲ့ ​ပေါ်လွင်​​အောင်​ကို လုပ်​ပြသွားတဲ့ အူဝဲ မဟုတ်​တဲ့ အ​ဝေး ⏩သီဟ ငါတို့လမ်းခွဲရ​အောင်​ .....ထိုအခန်းတွင်​ မျက်​​ထောက်​နီကြီးနဲ့ ​စေ့​စေ့ကြည့်​ပြီး ​ပြောတဲ့acting ဒီ​လိုလူမျိူးကို ဆက်​မ​ပေါင်းနိုင်​​တော့ဘူး သည်းမခံနိုင်​​တော့ဘူး ဆိုတဲ့ ခိုင်​မာ​နေတဲ့ ဆုံးဖြတ်​ချက်​​တွေ .....​ရွံစရာ ​ကောင်း​အောင်​​ကျေးဇူးကန်း​နေတဲ့ ​ယောကျာ်း ကို "​အောက်​တန်းစား ​သစ္စာမရှိတဲ့ ​ကျေးဇူးကန်းတဲ့အ​ ကောင်​" "နင့်​ကိုယ့်​နင်​နွားလို့ သတ်​မှတ်​ရင်​ နင်​ကနွားပဲ​ပေါ့ " ရွံစရာ​တွေ​ကောင်း​အောင်​​ပြော​နေတဲ့ ​ယောကျာ်းကို အံ့လည်းအံသြ ...ရွံရှာမုန်းတ်ိတဲ့အကြည့်​​တွေ စကား​တွေနဲ့ ...ရင့်​ရင့်​သီးသီး ပြန်​​ပြော တဲ့ ပြစ်​ရက်​စရာမရှိ​အောင်​ကို ​ကောင်းလွန်းတဲ့ အ​ဝေးရဲ့. တုန့်​ပြန်​ချက်​​တွေ ⏩ဇာတ်​သိမ်း (သတ်​ဖို့ဆဲဆဲလုပ်​​နေချိန်​) နားကျည်းမုန်းတီးရွံရှာချက်​​တွေနဲ့ ပြည့်​နှက်​​နေတဲ့ အသိတရားကို ဖြည်​ချ​ပေးလိုက်​တဲ့ အူဝဲဆိုပြီးကျယ်​​လောင်​တဲ့အသံနဲ့ ရင်​မှဖြစ်​တဲ့ရင်​​သွေးရဲ့ ငိုသံကိုကြားပြီး ....သတ်​မည့်​ဆဲဆဲ အချိန်​မှာ ​ဝေခွဲရခက်​​နေတဲ့ လရိပ်​​ဝေးဆိုတဲ့မိန်းမရဲ့ မျက်​နှာကို ကြည့်​ပြီး မျက်​ရည်​ ကျခဲ့ရတဲ့အထိကိုပြီပြီပြင်​ပြင်​ကို စလယ်​ ဆုံး လုပ်​ပြသွားနိုင်​တယ်​လို့ ထင်​မြင်​မိပါတယ်​။ ၂။အဝတ်​အစား .ဆံပင်​မိတ်​ကပ်​ စကားအ​ပြောအဆို သွားလာ​နေထိုင်​ပုံ မှစ၍ (မူလသရုပ်​​ဆောင်​ပုံစံ ​ပျောက်​၍ )ဇာတ်​​ကောင်​ပုံ ဝင်​​နေရမည်​။ 👇👇👇 ဒီအချက်​အတွက်​က လရိပ်​​ဝေးအ​နေနဲ့ ထူးထူး ခြားခြား ကြီးပြင်​ဆင်​စရာမလို​ပေမဲ့ သူ့​နေရာနဲ့သူ အိမိ​ထောင်​သည်​မိန်း ရာထူးကြီးကြီး ဝန်းထမ်းတစ်​​ ယောက်​ က​လေးမ​မွေးခင်​အချိန်​ က​လေး​မွေးပြီးချိန်​ အိမ်​မှာရှိ​နေချိန်​ ညအိပ်​ချိန်​ စသဖြင့်​ လိုက်​ဖတ်​ညီစွာ ဝတ်​ဆင်​ထားတာကို​တွေရတယ်​ ..... ဆွဲကြိုး နားကပ်​မှအစ. တစ်​ကားလုံး တစ်​မျိူးပဲဝတ်​တယ်​ ....ဆံပင်​မိတ်​ကပ်​ အထူးတလည်း ပြင်​ဆင်​ထားတာမျိူးမရှိပဲ ....ဇာတ်​ရုပ်​နဲ့ အံဝင်​စွာပဲ ပြင်​ဆင်​ထားတာ လို့မြင်​မိတယ်​ ။ ၃။ပူးတွဲ သရုပ်​​ဆောင်​ရမည့်​ အခြားသရုပ်​​ဆောင်​များနဲ့ အ​ပေးယူမျှ တစွာ သဘာဝကျ​အောင်​ သရုပ်​​ဆောင်​ နိုင်​ရမည်​။ 👇👇👇 ဇာတ်​ကားတကား​ကောင်းဖို့. တစ်​​ယောက်​တည်း ​တော်​ပြ်ီးချွန်​​ထွက်​​နေလို့မရဘူး တအား​တော်​လွန်း​နေရင်​လည်း ကိုယ်​နဲ့တွဲတဲ့ လူက မလိုက်​နိုင်​ရင်​ Overacting ​တွေ ဖြစ်​သွားတာများတယ်​ ။ လရိပ်​​ဝေးက. ..... အ​မေဖြစ်​သူ ထွန်းအိန္ဒြာ​ဗိုလ်​ ​ယောင်းမ. မြတ်​​ကေသီ​အောင်​ ​ယောကျာ်း ​ပြေတီဦး အိမ်​အကူ သန်းသန်းစိုး မယားငယ်​ ​မေက​ဗျာ ​ယောက္ခမ. ခင်​မို့မို့​အေး အန်​တီစန်း နွဲ့နွဲ့စန်း စသဖြင့်​ တစ်​ခန်းပါပါ နှစ်​ခန်းပါပါ ပါဝင်​တဲ့သရုပ်​​ ဆောင်​​တွေနဲ့. အ​ပေးယူမျှမျှ သရုပ်​ဆောင်​သွားတာ ငြင်းမရဘူး ..... ၄။ဇာတ်​​ဆောင်​အဖြစ်​သရုပ်​​ဆောင်​သူသည်​ ဇာတ်​လမ်း ကို ဦး​ဆောင်​လှုပ်​ရှားနိုင်​သူဖြစ်​ရမည်​ ။ ဇာတ်​ပို့သရုပ်​​ ဆောင်​များကို တွဲ​ခေါ်နိုင်​သူဖြစ်​ရမည်​။ 👇👇👇 ရင်​ဘတ်​ထဲကဓား ဟာ အူဝဲရဲ့ ဇာတ်​လို့​ပြောလို့ရသလို့. ဦး​ဆောင်​သွားလား မသွားဘူးလားဆိုတာက​တော့ အငြင်းပွားဖွယ်​မရှိနိုင်​​အောင်​ကို ဦး​ဆောင်​နိုင်​ခဲ့တယ်​ ...... အ​ဝေးတစ်​​ယောက်​တည်း ချွန်​ထွက်​ပြီး ​ကောင်း​နေတာမျိူးမဟုတ်​ပဲ ပါဝင်​တဲ့ ကဏ္ဍအသီးသိးက လူ​တွေအားလုံး နဲ့ အ​ပေးယူမျှ မျှ လုပ်​သွားနိုင်​လို့သာ အားလုံး​ကောင်းတဲ့ ဇာတ်​တခုဖြစ်​လာတာပါ ... ကဲဇာတ်​​ဆောင်​ဆုရဲ့ အင်္ဂါရပ်​​တွေနဲ့. အူဝဲရဲ့ လရိပ်​​ဝေး Character က ညီမညီ ပရိတ်​သတ်​တစ်​​ယောက်​ရဲ့ အမြင်​ဖြင့်​သာ😬 #pathy_pathy ...... ပရိတ်သတ်နဲ့ အကယ်ဒမီ ထပ်တူကျလေသောအခါ😘💖🎉🎉🎈 #Pathy_Pathy_Big_Fan_Of_Euwae🎉
Pathy Pathy Eaindra Kyaw Zin Crazy
30 Jun 2018 · 745K views
မွန်​ ရိုးရာ နတ်​ကနား ယိမ်း အက
" မွန်​ ရိုးရာ နတ်​ကနား ယိမ်း အက " ဟံသာဝတီ မွန်​ဘုရင်​ ​ခေတ်​ က​နေ ယ​နေ့ အချိန်​အထိ မျိုးဆက်​နဲ့ ချီပြီး လက်​ဆင့်​ကမ်း ထိန်းသိမ်းထားလျက်​ ရှိ​သော မွန်​ ရိုးရာ နတ်​ကနား ယိမ်း အက အ​ကြောင်း တ​စေ့တ​စောင်း တင်​ဆက်​ ပုံ​ဖော်​ထား ခြင်းဖြစ်​ပါသည်​.... ဒိင်​​လှော်​​ဒေါင်​ (Spiritual Dance) မွန်​ ရိုးရာ နတ်​ကနား ယိမ်း အက ​တေး​ရေး(ချူ).......နိုင်​​ရွှေပြည်​(နဲာထပ်​ဍုင်​...နဲာယှဲုိဗျီ) ဇင်းကျိုက်​မြို့(ဍုင်​ဇိုင်​ကျာ်​) ​တေးဆို(ဒ​ယှေ်​).... မိမြသန်း(မိမြဟ်​သန်​) (LL.B) အက(​လှေ်​)......... မွန်​ရိုးရာ ယဉ်​​ကျေးမှု အဖွဲ့ (ဂ​ကောံအဲာကုဲာ​ယေန်​သုာန်​မန်​) အကသင်​ပြသူ...........မိမြသန်း(မိမြဟ်​သန်​) (ညး​ဗ္တောန်​ထွး​လှေ်​) (LL.B) Director...............မင်းချမ်းမွန်​(မာံဆာန်​မန်​) (A M S) Min Mon Nyi Sar(Kaw Bein)
28 Feb · 3.5K views